Cabdiqaasim Salaad oo Madaxweyne Farmaajo ka codsaday in khilaafka la joojiyo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Cabdiqaasim Salaad oo Madaxweyne Farmaajo ka codsaday in khilaafka la joojiyo
Cabdiqaasim Salaad oo Madaxweyne Farmaajo ka codsaday in khilaafka la joojiyo
Madaxweynihii hore ee Somaliya, Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa sheegay in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka codsaday in laga gudbo khilaafka kala dhaxeeya Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble.
“Madaxweynaha waan la hadlay oo teleefan baan kula hadlay, waxaana ka codsaday in la joojiyo khilaafaadka. Khilaaf looma baahna hadda, sababtoo ah doorashaa la rabaa in la galo, iyadoo khilaaf jirin in la galaana rajeynayaa.” Ayuu yiri Madaxweynihii hore ee dalka.
“Waxaan ugu baaqayaa shacabka inaanay cid la safaninee, laga codsado ciddii is haysataa, iyadoo heshiis la yahay oo Madaxda Qaranka iyo dadkuba ay heshiis yihiin in doorasho xalaal ah la galo.” Ayuu yiri Cabdiqaasim Salaad.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay maqnaanshaha Prof. Cabdiwahaab Sh. Cabdisamad
Next articleKulankii Farmaajo iyo Rooble oo lagu kala kacay (3 qodob ayaa laga dooday)